GITE AU ATTIC COZY *** e-Aisne
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguAudrey
I-cottage yethu eyenzelwe abantu aba-4 ifakwe kwi-attic ye-barn endala. Ifulethi liya kukuhenda ngomoya walo ofudumeleyo kunye nopholileyo.
Ukuzola kunye nokuzola kwendawo kumema ukuba uthathe ithuba legadi ukuze uphumle ngokutshiswa lilanga emva kokutya kwindawo evulekileyo kwi-terrace.
Siyimizuzu emi-5 ngemoto ukusuka kwinqaba yaseNizy le Compte, kwabo beze emtshatweni.
30% isaphulelo kubhukisho ngeveki
Ungena kwi-barn esebenza njengendawo yolwamkelo kunye neencwadana ezinemifanekiso ezenziwe ukuba zifumaneke emva koko ufikelele kwindlu enomnyango apho unokushiya izihlangu zakho kunye needyasi emva koko izitepsi ziya kukukhokelela kwigumbi lokuhlala elidibanisa igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala. ukutya.
Indawo yokulala ixhotyiselwe ukuhlalisa abantu aba-4. Uya kufumana zonke izixhobo eziluncedo ukulungiselela isidlo sakusasa (i-kettle, umenzi wekhofi, i-microwave, i-oven, i-toaster ...) kunye nalabo bachitha ixesha elide, umatshini wokuhlamba, isinyithi.
Ifenitshala iye yahlaziywa ukudala umoya oqhelekileyo.
Senze indawo yedama kwaye sinikezela ngegadi yemifuno ethatha inxaxheba.
Ukuze ugweme ukumangalisa, i-barn ifumaneka kumhlaba wethu, indlu yethu ayikho kude, sirenta kuphela ngaphandle kweeholide zethu. Xa usiza, siyasebenza. Ke unegadi kunye nedama lokuqubha imini yonke kuwe. Kwaye ukuba ufuna ukungcamla isidlo sasekhaya, undazise.
Sifuna iGrenier Cozy ibe yindawo yeholide kodwa ibe yindawo yokutshintshiselana kunye nokwabelana.
Misa ixesha kwaye uzibandakanye kumzuzu wokuphila kakuhle kwi-Spa ekufutshane nedolophana apho unokubhukisha khona i-massage okanye i-hammam kunye neseshoni ye-sauna.
Le lali (ecaleni D966) ibekwe ekwahlukaneni kweendlela, le Aisne, i Ardennes kunye Marne, ikhuthaza ukuba amsunduze ngaphandle kwebala ndibethwa Discover Laon kunye idolophu ayo aphezulu, zaqiniswa-8 km yalo kwenqaba, ukuhlola emabaleni IMfazwe Enkulu ngokuhamba kwiChemin des Dames, undwendwela i-Dragon Cave okanye iReims, i-cathedral yayo kunye neeseli zayo zeChampagne.
Zivumele ulingwe ngokuhlala utyebile kwizinto ezifunyenweyo, ukuphumla kunye nokuzola ...
Bonjour, nous sommes motards et nous pouvons mettre à l'abri vos motos dans un bâtiment fermé.
Ndikhona ukukucebisa ngeendawo onokuthi uzindwendwele, imisebenzi onokuthi uyifumane kunye nezicwangciso ezilungileyo zokuphuma.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lor